Thwebula Onavo Count 2.7.2 – Vessoft
Thwebula Onavo Count
Onavo Bala – isofthiwe ukugada nokulawula ukusetshenziswa kwanoma iyiphi uhlobo idatha yeselula. Isofthiwe futhi ubonisa inani traffic esebenziswe izinhlelo zokusebenza ezahlukene phakathi nenkathi ethile yesikhathi. Bala Onavo ikuvumela ukuba uzibekele ukusetshenziswa traffic futhi uvimbele ukufinyelela kwi-inthanethi ukuze uthole izicelo ethize. Isofthiwe ubonisa izibalo ukusetshenziswa kwedatha idivayisi imikhakha ehlukahlukene. Bala Onavo inikeza okufana elilungile iningi tariff iphakethe esekelwe ukuqoqwa idatha esetshenziswa.
Ukuhlaziywa kwe-traffic esetshenziswa
Ubonisa umsebenzi internet
ukumisa Easy senyanga umkhawulo kanye nokukhokhwa period
Isaziso ukusetshenziswa traffic ezinye izinhlelo zokusebenza
Amazwana on Onavo Count:
Onavo Count Ahlobene software: